Gu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509 – SR 509 Jidka xawaaraha | WSDOT
Gu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509 – SR 509 Jidka xawaaraha
homeConstruction & planningOnline open housesGu’ga 2022-Kulanka Furan ee Kładka Tooska ah ee Dhamaystirka Mashruuca SR 509SR 509 Jidka xawaaraha
Labada mayl ee u dambeeya ee afarta haad ee cusub ee 509 waxay ku fidsan yihiin 24th Avenue South ilaa South 188th Street ee SeaTac, halkaas oo wadada cusubi ay kula kulanto wadada SR 509 ee jirta.
Isweydaarsiga SR 509/24th Avenue South wuxuu furmi doonaa 2025 marka la dhammeeyo maylka ugu horeeya ee SR 509 ee hoos yimaada Heerka 1b ee Mashruuca Dhamaystirka SR 509.
Isweydaarsiga 24th Avenue South waxaa ka mid noqon doona SR 509 dhanka konfureed iyo wadada ku wajahan dhanka waqooyi ee wadada 24th Avenue South.
Si loo ilaaliyo gelitaanka waddooyinka maxalliga ah ee aagga, jid-weynuhu wuxuu ka gudbi doonaa South Street 200th Street iyo Des Moines Memorial Drive iyo hoosta buundada cusub ee Koonfurta 192nd Street. Gudaha Des Moines, South 194th Street uma sii ahaan doonto isku xirka tooska ah ee u dhexeeya 8th Avenue South iyo Des Moines Memorial Drive. Gelitaanka maxaliga ah ee Des Moines Memorial Drive ee Koonfurta 194th Street waxaa lagu dayactiridoonaa iyada oo loo marayo booska 11th ee Koonfurta iyo Koonfurta 196th. South 196th Street iyo 18th Avenue South ee SeaTac uma sii adeegi doono taraafikada gaadiidka, taa beddelkeeda waxay u adeegi doontaa qayb muhiim ah oo ka mid ah qaybta cusub ee Harada (Lake) ilaa Sound wadiiqada isticmaalka badan, oo uu maalgeliyay mashruuca .
Dib-u-qiimaynta deegaanka ee 2018 (NEPA) ayaa xaqiijisay in naqshadaha la cusboonaysiiyay ay u hoggaansan tahay xeerarka federaalka iyo gobolka oo dhan ee caafimaadka deegaanka, ilaalinta deegaanka, iyo caddaaladda deegaanka, oo ay ku jirto hubinta in mashruuca ku filan yahay deegaanka, gaadiid dadweyanaha, iyo marin-u-helid habka badan.
Jidfur (Lacagta Jidka lagu Maro)
Si loo maareeyo baahida taraafikada oo loo abuuro maalgelinta dhismaha mashruuca iyo kharashaadka dayactirka socda, 2019 sharci-dejinta Gobolka Washington waxa uu oggolaaday lacag- bixinno elektaroonig ah oo la saarayo waddada cusub ee SR 509. Keliya qaybta cusub ee SR 509 (inta u dhaxaysa South 188th Street iyo I-5) ayaa la soo diri doonaa; Dhammaan qaybaha hadda jira ee SR 509 way ahaan doonaan kuwo aan lacag laga qaadin.
Waxaa jiri doona hal goob oo lacag ah (ma jirto tollbooth) wadada SR 509 ee u dhaxaysa I-5 iyo SR 99. Lacagta wadada cusub ee SR 509 waxay awood u siin doonta WSDOT inay si fiican u maamusho tirada taraafig ee marinka. Bixinta isku xirka degdega ah ee dekedaha gobolka waxay la macno tahay gaadiidka xamuulka inuu aad u yaraan doono isticmaalka waddooyinka maxalliga ah, yaraynta saxmadda iyo yaraynta qiiqa ka imanaya daarnaashaada gaadiidka ee xad-dhaafka ah.
Qiimaha lacagtu way kala duwanaan doontaa wakhtiga maalinta waxaana dejin doona Guddiga Gaadiidka Gobolka Washington iyadoo la raacayo nidaamka dadweynaha ee la qorsheeyay inuu bilaabmo 2024.